तपाईको गिँजा कालो छ ? सावधान रहनुहोस् निम्त्याउन सक्छ रोगको खतरा ! – ramechhapkhabar.com
हाँसो र मुस्कान हाम्रो स्वास्थ्य को लागी लाभदायक छ। त्यसैले हामी सँधै खुशी हुने कोशिश गर्दछौं। कहिलेकाँही यो बानीले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहि समयमा, हाम्रो दाँत र गिजाँहअरु तब मात्र देखा पर्दछ जब हामी हाँस्दछौं र प्राय: जसो हाम्रा दाँतहरू सेता र गिँजा रातो वा गुलाबी हुन्छन्, जुन स्वस्थ मानिन्छ। तर धेरै चोटि यो देखीएको छ कि धेरै मानिसहरु को गिँजा कालो या त गिँजामा कालो दब्बा देखिन्छ ।
औषधिहरूको प्रयोग गर्नाले:केही औषधीको साइड इफेक्टका कारण कहिलेकाँही तपाईका गिँजाहरु कालो हुनसक्छन् । अनुसन्धानले देखाउँदछ कि केहि डिप्रेसन औषधी (एंटी-डिप्रेसेंट्स), मलेरिया, र एन्टिबायोटिकले कुनै व्यक्तिको गिँजालाई कालो बनाउन सक्छGingivitis को कारणले:गिँजाको एक छुट्टै खास बिमारी हुन्छ ।, जसलाई अल्सरेटिभ जिंजिवाइटिस भनिन्छ। यो संक्रमणको एक प्रकार हो, जसको कारणले गर्दा दाँतको गिँजामा दुखाइ, ज्वरो र सासको गनाउने समस्या हुन सक्छ।
धुम्रपानका कारण:तपाईंलाई थाहा छ धूम्रपानले क्यान्सर, फोक्सोको रोग, श्वासप्रश्वास रोग, हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम बढाउँदछ। तर के तपाईंलाई थाहा छ धूम्रपानले तपाईंको गिँजालाई कालो बनाउन सक्छरु हो, जो मानिस सिगरेट, चुरोट अधिक पिउँछन् उनीहरूलाई ओठ र गिँजाको कालोपन जस्ता समस्या हुन सक्छ।
धूम्रपान गर्ने लतले तपाईंको मुस्कानको सुन्दरतालाई बिगार्न सक्छ। कहिलेकाँही सम्पूर्ण गिँजा कालो हुनुको सट्टा, गिँजामा सानो कालो दागहरू देखा पर्छन्। यो मुखको क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हो । त्यसैले यदि तपाईंले त्यस्तो संकेत देख्नुभयो भने तुरून्त सावधान हुनु आवश्यक छ।अधिक मेलेनिन संचय को कारण:सामान्यतया, कालो छाला भएका मानिसहरुको शरीरमा अधिक मेलानिन हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको गिँजा पनि कालो हुन सक्छ। मेलानिन एक प्रकारको तत्त्व हो जसले छालालाई प्राकृतिक बनाउँदछ र जसले छालाको रङ्गलाई गाढा बनाउछ ।